IPhone X agaghị abịa naanị ya ma ọ bụ na Apple Watch Series 3 ga - abụ eziokwu echi | Akụkọ akụrụngwa
A awa ole na ole mgbe Apple si Keynote, nke ọhụrụ iPhone ga-ọkọnọ, ọ na-leaked na Golden Master version nke ọhụrụ iOS 11. Usoro ikpeazụ nke Apple sistemụ arụmọrụ ọhụrụ a agbasaala maka obere oge ebe ọ bụ na ndị si Cupertino akwụsịla ngwa ngwa ịbanye ya, mana ọ mụtala iji mụta ọtụtụ ozi na-atọ ụtọ.
Otu n'ime ha bụ na iPhone X agaghị abịa naanị ya, ọ ga-esonyere ya na a ọhụrụ Apple Watch Series 3, nke anyị chere ga-enwe ọtụtụ atụmatụ ọhụrụ iji nye anyị. Ihe o yiri ka enenyere ekele maka ehi mmiri ahụ bụ na anyị ga-ahụ agba ọhụụ akpọrọ "Blush Gold" maka elekere egwuregwu aluminom yana nke ọhụrụ akpọrọ "Ceramic Gray" maka Apple Watch Edition.
E wepụtara ozi a na koodu iOS 11, ọ bụ ezie na ọ bụghị mmesi obi ike na Apple ga-etinye Apple Watch Series 3 na ire ere echi yana agba ọhụrụ.
Banyere akwụkwọ ọhụụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ Apple nwere ike ịnye anyị, a ga-enwe ihe mmetụta igwe biometric nke a ga - etinye na ngwa Ahụike, ụfọdụ obere mgbanwe na imewe ahụ, yana ọtụtụ akwụkwọ ọhụrụ ndị ọzọ anyị ga - ahụ echi na Steve Jobs. Aterlọ ihe nkiri, ebe Ihe omume Apple na-echere ogologo oge ga-eme ebe o yiri ka ọ kwadoro na anyị agaghị ahụ naanị iPhone ọhụrụ, mana ụfọdụ ngwaọrụ ndị ọzọ.
Ì chere na anyị ga-ahụ Apple Watch Series 3 ọhụụ ka akara ngosi nke iOS 11 gosipụtara?. Gwa anyị uche gị na oghere edebere maka ịza ajụjụ na post a ma ọ bụ site na netwọkụ mmekọrịta anyị nọ ugbu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » smartwatch » IPhone X agaghị abịa naanị ya na Apple Watch Series 3 ga-abụ eziokwu echi